Huawei weputara 2018 Y Series ohuru: ekwe nti abuo nwere ezigbo oru na ego agbanwe Akụkọ akụrụngwa
O yiri ka Huawei enweghị ike ịbụ nke abụọ ma kwupụta mwepụta nke ọhụrụ Y Series nke ngwaọrụ mkpanaka. Na nke a, ọ bụ ihe gbasara Huawei Y7 na Huawei Y6 nke bụ ngwaọrụ ntinye maka ndị na-achọghị iji nnukwu ego na ndị wepụtara EMUI 8.0 dabere na gam akporo 8.0.
Abụọ ndị a ụdị ọhụrụ Huawei Y7 na Huawei Y6, ha nwere ngosipụta nke FullView nke Huawei, atụmatụ igwefoto dị elu, na ndụ batrị ogologo. N'oge a anyị na-ahụ otu Huawei si ekwu okwu niche ahịa nwere mmasị na ama ama dị mma na ọnụ ọnụ ọnụ.
1 Huawei Y7 ohuru
Huawei Y7 ohuru
Na ihe nlere a anyi choputara ihuenyo 5,99-anụ ọhịa Huawei FullView -enweghị oke bevel na a ruru 18: 9. Na ihe nlere a, anyị na-ahụ ihe ngosi iko iko 2.5D, nke ahụ na-enye ụfọdụ nkọwa na-adọrọ mmasị n'ihe gbasara igwefoto, na nke a ọ nwere c8 megapixel n'ihu igwefoto na a 13 megapixel n'azụ igwefoto. Advanced selfie toning flash na-achọpụta na-acha ọkụ na ihu ma jiri amamihe na-edozi ọkwa nchapụta maka eserese na-adịchaghị mma.
Tụkwasị na nke a, ihe nlele a na-agbakwunye ihe nhazi Octa Core Snapdragon 430, Adreno 506 GPU, 2GB nke RAM yana ihe nchekwa 16GB dị n'ime, mgbatị mkpịsị aka na ihu ihu ihu dị elu site na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ nwere oghere nwere ikike maka kaadị atọ, nke na-akwado kaadị SIM abụọ NANO n'otu oge, yana kaadi Micro SD nke na-enye 256 GB maka nchekwa ọzọ. Na ihe nlereanya a Odi agba di acha anụnụ anụnụ na nwa, ọnụahịa ya malitere na at 199.
Na nke a, anyị nwere Huawei FullView 5,7 nke anụ ọhịa ahụ na HD ihuenyo, yana otu nkọwa dịka nwanne ya nwoke n'ihe gbasara igwefoto. Na nke a na-agbakwunye Huawei's Histen technology, nke na-enye ụzọ atọ dị iche iche nke ige egwu: nso (okwu okwu isi okwu), ihu (ihe nkiri) na obosara (mmetụta egwu). N'aka nke ọzọ, ọ na-eweta Snapdragon 425 processor, yana 2GB RAM na 16GB nke nchekwa dị n'ime.
Ngwaọrụ Huawei abụọ nwere batrị nke 3000 mAh nke dịka onye nrụpụta ga-esi gbatịkwuo ndụ ya ruo ọtụtụ awa. Na Huawei Y7, ndị ọrụ nwere ike ịlele vidiyo ruo elekere 13 ogologo ma ọ bụ kpọọ egwu ruo elekere 58. Na Y6, ndị ọrụ nwere ike ịlele vidiyo ruo elekere 14 ma ọ bụ kpọọ egwu ruo elekere 57. Modelsdị ọhụrụ abụọ na-agbakwunye na ndepụta ogologo nke ngwaọrụ ndenye nwere nkọwa na-adọrọ mmasị na-atụle ọnụahịa nke onye ọ bụla n'ime ha. N'okwu a Huawei Y6 dị na oji, acha anụnụ anụnụ na ọla edo site na 149 XNUMX.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Huawei weputara ohuru ya nke ohuru nke 2018: ekwenti abuo nwere ezi oru ya na onu ahia ya